A enhle ngempela igama Adeline e izindlela German izinto "ezihloniphekayo, kubalulekile." Kodwa ngezinye izilimi igama sitolikwa njengoba - "elimnandi '.
Obapha lelo gama ezihloniphekayo, njengoba umthetho, has a uhlamvu ezolile, zazivuma futhi kunokulinganisela yini. Nanguya okuthembekile, ukugcina isikhathi, ezikhuthele akusho baphonse amazwi emoyeni, futhi ungalokothi kuletha izihlobo zakhe nabangane. Njengoba for umsebenzi, khona-ke kuyinto ukubaluleka okuthiwa Adeline ngezinga elifanele kufaneleka ngokugcwele: lady iyakwazi ukukhuluma kanye nabanye abantu, amakhono ehlukene kokuqala ukuze axazulule izingxabano, unikezwa ngokuphelele umsebenzi. Nokho, ekhethekile umsebenzi eziphakeme Adeline awufiki. Zonke iphutha ukungathandi kwabo okumatasa futhi uhlale izindawo eziminyene. I iholidi kakhulu ukuba abe - kungcono ithule cwaka futhi inokuthula isidleke ethokomele lapho kuphela abantu abaseduze ngeke azungeze.
Imfihlakalo igama Adeline uthi lapho eseyingane eseneminyaka ingane ngempela abasengozini ezingezwakali, futhi ekugcineni wakwazi ukuqeda lezo zimfanelo. Kodwa yasondelana kuzophinde kube ubuyela yokuguga. Futhi obapha igama original, ngeshwa, uyophinde abe sengozini futhi ezingezwakali.
Meaning of igama Adeline ephawula wakhe njengoba ubuntu namandla, yimpumelelo nabadumile, ngubani njalo amandla namandla isiqalo esisha. Ngokuvamile, zonke izinto ukuthi iqala, iphela ngempumelelo. Abesifazane naleli gama afakwa abanye igunya, amandla angokomoya nokuphana isegazini. Konke lokhu Yiqiniso, kuyabasiza ezimpilweni zabo. Abanikazi kwegama abekho umkhuba baphonse in the "pool nekhanda lakhe" ezenzweni ahlukahlukene ezingabazekayo (lokhu Ongekho ngasohlangothini lwabo!). Zonke izinyathelo zakhe nezinqumo Adeline kukhona ngamabomu futhi uyaqaphela, nge impela ikhanda cool kanye isizathu. Wakhe zonke izinyathelo okuhloswe ngaso sinokuthula nenhlalakahle yomkhaya wakhe.
Phakathi kwezinye izinto, Adeline, ukubaluleka igama okusho ukuba khona coquetry, futhi ezinye Gab, limnandi kakhulu ukukhuluma (ngenxa yokuthi lezi zimfanelo ephila endaweni ethile umthamo ubuncane). Kwabanye abantu izimfihlo Adeline neze kubonisa. Uma wakhe wokufakaza esimweni esingajabulisi, intombazane ngeke konke okusemandleni ukuzama ukuxazulula lolo dweshu ngokuthula.
Adeline - lover obucayi izinkanuko konke enhle, ngokuvamile kukodwa kuba ikhono elikhulu futhi lokusungula. Uma ikhono ukuthuthukisa ebuntwaneni, khona-ke amantombazane uthole okuhle umculi, umbhali noma umculi. Meaning of igama Adeline wayesho ukuthi ngenkulumo ethi ukunambitheka elicwengekileyo eyinkimbinkimbi. Ngakho-ke, ngamunye obapha leli gama kuthatha ngokucophelela ukunakekelwa ngayo ngokwayo nangabanye umzimba wakhe.
Ngokukhetha satellite ezingaba Adeline ukuphila esifanelana sinombono ongathí sina futhi umthwalo wemfanelo, ke akhethiwe indoda kufanele ibe banomuzwa ezinhle futhi ukanye naye, "nombono ofanayo." Thanda izingane abathwali leli gama amanga nemvelo, ngakho Adeline ingane yakho zama ukunikeza engcono ukugxilisa umuzwa ubuhle.
Ngaphezu kwalokho, ukubaluleka igama Adeline kusho umuzwa wangaphakathi of umuzwa. Ngakho ungazami ukuba ikhohlise intombazane, waphendula ngokushesha embule nenkohliso yakho. Uma ufuna ukuzenza bahle phezu kwakhe, khona-ke kudayilogi ukususa ukuthopha, futhi ususe imaskhi. Kulokhu, Adelina akuvumele singene ezweni lakhe elingaphakathi!
Uthando ngesikhathi sokuzalwa komuntu kwedivayisi amabhubesi inhlanzi, kanye ngokoqobo amabhubesi nezinye Izimpawu zezinkanyezi
Ukufaneleka of Aquarius besilisa Taurus zesifazane: Love ngesikhathi sokuzalwa komuntu
Unyaka we Sheep: izici nencazelo uphawu
Oberon, Uranus satellite: incazelo
Carrot Juice: sezindawo ewusizo kanye contraindications, amathiphu okunomsoco
Amaqiniso 14 kusukela lwezifundo zesikole, empeleni, ekugcineni kwahlaluka ukuthi ayilungile
Ukupheka ndawonye amanzi okugqumisa e multivarka "Redmond"
Isikhumba esomile ingane. Isikhumba esomile ezinganeni - kubangela. Kungani isikhumba esomile e ingane?
Izimo ababesebenza kuzo: Ukwahlukaniswa izici zezimboni kwemvelo. ngezigaba ngezinyathelo zenhlanzeko okwakufanele izimo zokusebenza